ဘလော့ကြွလာ မိတ်သဟာ အပေါင်းကို….
ဆေးပေါင်းခတဲ့ည အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အသုပ်စုံလေးနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်…..(မဲဇလီဖူးသုပ် အမှတ်နှင့် စားရန်)
ဒါက ခေါက်ဆွဲသုပ်ပါ…..ဘေးကဗူးလေးထဲက ကြက်သွန်ကြော်လေး ဖြူးစားဖို့……
ပုဇွန်ကို မီးကင်၊ သံပုရည်လေးညှစ်ပြီး ကြက်သွန်၊ မြေပဲဆံနဲ့ သုပ်ထားတာပါ…..
ကန်စွန်းရွက်ကြော်….(ဒါက ဂျာမဏီမှာ ရွှေဟင်း……)
”ကျောင်းသူဟုတ်တော့ဘူး..အလုပ်လုပ်နေပြီ” ဆိုတဲ့ ညီမလေး… မမလက်ရာ ကြိုက်လား….
Posted by မဟာဆန် at 10:44 PM
မမရေ.. မနက်စာ အသုပ်စုံ လာစားသွားတယ်။ ကောင်းမှ ကောင်း။